သွားဖြူစေတဲ့ လိမ္မော်ခွံ | MyFood Myanmar
ဘယျသူကမြား သှားတှေ မဲညဈနတောကို ကွိုကျပါသလဲ? ကနျြးမာတဲ့သှားတှေ ဖွဈစပွေီး ဖွူဖှေးနတေဲ့ သှားတှဟော လူတဈယောကျရဲ့ စိတျကိုရော လူကိုပါ ကနျြးမာစပေါတယျ။ အပွုံးတှကေို လငျးလကျစပွေီး လှပတဲ့သှားတှကွေောငျ့ အမွဲ ပွုံးဖွဈနတေဲ့အခါ ပြျောရှငျမှုဆိုတာလညျး ရောကျရှိလာပါလိမျ့မယျ။
သှားတှဟော ကှမျးစား၊ ဆေးလိပျသောကျကွတဲ့ အခါ အမြားဆုံး ဝါသှားတတျပါတယျ။ အခြို့အစားအစာတှနေဲ့ အရညျတှကွေောငျ့လညျး သှားတှဟော ဝါညဈနတေတျပါတယျ။ သှေးတှေ ဖွူဖှေးစဖေို့ စိတျခရြတဲ့ အိမျတှငျးနညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။ သှားဆရာဝနျတှဆေီကနေ အကွံဉာဏျယူပွီး လုပျမယျဆိုရငျတော့ စိတျအခရြဆုံးပါပဲ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈနပေါစေ အိမျတှငျးကုထုံးတှဟောလညျး အန်တရာယျတော့ မရှိပါဘူး။ သှားတှကေို ဖွူစဖေို့ သုံးရမယျ့ အရာကတော့ လိမ်မျောသီးရဲ့ အခှံပါ။ အခှံဆိုတဲ့ နရောပါ အထဲက အဖွူသားကို ဆိုလိုတာပါ။ အပွငျ အဝါရောငျဖကျခွမျး မဟုတျပါဘူး။
လိမ်မျောခှံမှာ Vitamin C, Pectin, Limonene, Glucarate နဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ပါဝငျပွီး သှားကို သဘာဝအတိုငျး ဖွူဖှေးစနေိုငျပါတယျ။ ပွုလုပျပုံကတော့ လိမ်မျောသီးကို အခှံနှာပွီး ရလာတဲ့ အခှံကို အဖွူဖကျခွမျးကနေ သှားတှေ အပျေါတငျထားပါ။ သှားတှပေျေါမှာ အခှံကနေ ကလြာတဲ့ အရညျတှကေို မြားလာစဖေို့ ၃-၄ မိနဈလောကျ ခဏထားပါ။ ပွီးရငျ အဲ့ဒီ အခှံနဲ့ သှားတှကေို ပှတျတိုကျပေးပါ။ အနညျးငယျ ညဈလာတဲ့ အခါ လှငျ့ပဈပွီး အသဈနဲ့ ထပျပှတျပေးပါ။
လိမ်မျောသီးလိုပဲ အခွားအသီးတှေ ဖွဈတဲ့ လီမှနျ၊ စတျောဘယျရီ၊ ပနျးသီးနဲ့ စပဈြသီးခွောကျတှဟောလညျး သှားတှကေို ဖွူစပေါတယျ။
အားလုံးပဲ အပွုံးလေးတှေ လငျးလကျကွပါစေ။
ဘယ်သူကများ သွားတွေ မဲညစ်နေတာကို ကြိုက်ပါသလဲ? ကျန်းမာတဲ့သွားတွေ ဖြစ်စေပြီး ဖြူဖွေးနေတဲ့ သွားတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုရော လူကိုပါ ကျန်းမာစေပါတယ်။ အပြုံးတွေကို လင်းလက်စေပြီး လှပတဲ့သွားတွေကြောင့် အမြဲ ပြုံးဖြစ်နေတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလည်း ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
သွားတွေဟာ ကွမ်းစား၊ ဆေးလိပ်သောက်ကြတဲ့ အခါ အများဆုံး ၀ါသွားတတ်ပါတယ်။ အချို့အစားအစာတွေနဲ့ အရည်တွေကြောင့်လည်း သွားတွေဟာ ၀ါညစ်နေတတ်ပါတယ်။ သွေးတွေ ဖြူဖွေးစေဖို့ စိတ်ချရတဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သွားဆရာဝန်တွေဆီကနေ အကြံဥာဏ်ယူပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်အချရဆုံးပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေဟာလည်း အန္တရာယ်တော့ မရှိပါဘူး။ သွားတွေကို ဖြူစေဖို့ သုံးရမယ့် အရာကတော့ လိမ္မော်သီးရဲ့ အခွံပါ။ အခွံဆိုတဲ့ နေရာပါ အထဲက အဖြူသားကို ဆိုလိုတာပါ။ အပြင် အ၀ါရောင်ဖက်ခြမ်း မဟုတ်ပါဘူး။
လိမ္မော်ခွံမှာ Vitamin C, Pectin, Limonene, Glucarate နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး သွားကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူဖွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ လိမ္မော်သီးကို အခွံနွှာပြီး ရလာတဲ့ အခွံကို အဖြူဖက်ခြမ်းကနေ သွားတွေ အပေါ်တင်ထားပါ။ သွားတွေပေါ်မှာ အခွံကနေ ကျလာတဲ့ အရည်တွေကို များလာစေဖို့ ၃-၄ မိနစ်လောက် ခဏထားပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီ အခွံနဲ့ သွားတွေကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ အနည်းငယ် ညစ်လာတဲ့ အခါ လွှင့်ပစ်ပြီး အသစ်နဲ့ ထပ်ပွတ်ပေးပါ။
လိမ္မော်သီးလိုပဲ အခြားအသီးတွေ ဖြစ်တဲ့ လီမွန်၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ပန်းသီးနဲ့ စပျစ်သီးခြောက်တွေဟာလည်း သွားတွေကို ဖြူစေပါတယ်။
အားလုံးပဲ အပြုံးလေးတွေ လင်းလက်ကြပါစေ။
MyFood Myanmar2019-11-20T15:58:08+06:30August 18th, 2016|Health, Knowledge|